Mety ho gaga ianao fa ho faranana ny referansy B2B | Martech Zone
Ny milina fivarotana amin'ny orinasa B2B rehetra dia tokony ho voadio tsara, voahosotra tsara ary mihazakazaka hafainganam-pandeha mba hitondra tena tsara amin'ny farany. Mino aho fa orinasa maro no mijaly tsotra satria miankina betsaka amin'ny orinasa vaovao amin'ny alàlan'ny antso mangatsiaka izy ireo, saingy ny ekipany dia tsy manana ekipa mety hanaovana ny asa mafy hahatratrarana fahombiazana.
Vao tsy ela akory izay ny CEO iray dia nizara tamiko ny Metrics momba ny varotra sy ny marketing ho an'ny lozisialy mahomby amin'ny maha-serivisy serivisy an'i Insight Venture Partners - ary mety hanaitra anao ny isa. Mila asa iray taonina vao mahazo mpanjifa vaovao. Tsy afaka manana ekipa tsy tafiditra am-pandehanana isan'andro ianao ary manantena ny hitondra fanovana.
Sa azonao? Misy loharanom-barotra B2B iray izay manova avo kokoa noho ny hafa rehetra mety tsy araraotinao.
Rehefa manadihady ny tahan'ny fiovam-po isaky ny fantsona dia mivoaka ho mpandresy mazava ny fantsona iray. Ny mpanjifa sy ny mpiasa ampiasain'ny mpiasa dia miteraka taham-panovana 3.63%, efa ho avo roa heny noho ny fantsona manaraka — tranonkala manana taham-panovana 1.55%. Ny sosialy dia manana taham-panovana 1.47% ary karama 0.99% karama. Ny fantsona faran'izay ratsy indrindra dia ny lisitra mitarika misy taham-panovana 0.02%, fisehoan-javatra miaraka amin'ny tahan'ny fiovam-po 0.04% ary fampielezan-kevitra amin'ny mailaka 0.07%. Gilad Raichstain, Implisit.
Gaga foana izahay rehefa miresaka amin'ireo mpiara-miombon'antoka vahaolana ary maro amin'izy ireo no tsy manana programa napetraka izay manome valisoa ho an'ny mpiasa na ny fanondroan'ny mpanjifa. Tompon'antoka amin'ny orinasanao ny mpiasanao - mampiroborobo anao amin'ny tambajotran'izy ireo. Ny mpanjifanao dia loharano mahatalanjona iray hafa. Manana mailaka mivoaka tsindraindray ve ianao raha te-hijery olona? Manome valisoa na vola ho an'ireo referral ireo ve ianao? Ity data ity dia mety hahatonga anao hanomboka fotsiny!
Farafaharatsiny farafahakeliny, ny fananana pejy fampitana izay misy loharano misy rohy tokana zaraina amin'ireo mpiasanao, ny mpanjifanao ary ny mpiara-miasa aminao dia tokony ho lohalaharana amin'ny laharam-pahamehanao. Io dia hahafahanao manara-maso sy manome valisoa ireo referral tsara indrindra nataonao!
Ampidiro manavao ny fahatsinjovanao sy ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny rakitsoratra CRM mety, mamela anao hitantana ny fantsom-pianaranao amin'ny fomba mahomby kokoa eo am-pitehirizana fotoana sy fotoana mahavelom-bolo anao amin'ny asa mandreraka. Implisit dia mampiasa algorithms mamantatra ny mailaka tsirairay, ny fifandraisana ary ny hetsika kalandrie ary ampifanaraho amin'ny fotoana mety - 100% ho azy.
Tags: b2bbenchmarks b2bb2b ny referralvarotra b2bGilad Raichstainimplisit
Sary andron'ny mpifankatia 2015
Jan 6, 2015 ao amin'ny 5: 31 AM
Wow lahatsoratra tena tsara. Nofaritanao tamin'ny fomba tsara ny zava-drehetra. MISAOTRA
20 Aogositra 2015 à 10:53
Doug, nametraka programa fanondroana teo anivon'ny ekipako aho tamin'ity taona ity (2015). Ny tsara indrindra nataoko. Tena programa tsotra izany. Rehefa mitondra mpanjifa vaovao ao amin'ny portfolio-nay ny iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipako, dia manome valisoa 5% amin'ny fananganana tranokala ho an'io mpiasa io aho. Noho izany, ohatra, raha manondro tetikasa tranokala $10,000 izy ireo, dia hahazo bonus $500 izy ireo. Tian'ny ekipako ve ity programa ity? Duh! Eny, tiany izany.
21 Aogositra 2015 à 1:02
Tena mahafinaritra i Greg! Tianay ny fandaharana referral. Mihevitra ny sasany fa fomba fanao hafahafa izany, fa ny orinasa dia mandoa vola amin'ny mpivarotra amin'ny fotoana rehetra mba hanampy amin'ny fampandehanana orinasa… maninona no tsy mandoa ny mpiara-miasa aminao sy ny mpiasanao ianao?